Indawo yokuhlala yasekhaya yemvelo - In d lap of Nature - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yasekhaya yemvelo - In d lap of Nature
Dodun Rajputan, Himachal Pradesh, i-India
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Annu
Uma ufuna indawo yamahhala ye-COVID, kufanele uvakashele lapha. Le ndawo iseduze nemvelo ngokuthula okukhulu ebusuku. Iseduze kwezinye izindawo zomoya njengeThempeli laseKaleshwar Mahadev osebeni lomfula iBeas kanye nethempeli laseJawalamukhi liqhele ngamakhilomitha angu-15 ukusuka kule ndawo. Lokhu kuqhele ngamakhilomitha amathathu ukusuka kuthelawayeka Kazwelonke omkhulu futhi kuxhumene kakhulu nesikhungo sezokuthutha. Ungase ujabulele iholide lakho ngaphandle kweziphazamiso futhi uzizwe ufana nekhaya futhi uphephe kakhulu.
Uzophathwa umakadebona webutho laseNdiya, owake waba u-Commando, kanye nonkosikazi wakhe.
Ikotishi liyindawo ekahle yokuphumula yabahambi abavakashela eJawala Ji, eChintpurni naseBaglamukhi; ukuphunyuka kwempelasonto okujabulisayo kwalabo abagcina ishejuli ematasatasa, kanye nokuhlala isikhathi eside ubalekela ukudoba, abahambi bezinyoni, abaqwali, nabathandi bemvelo. Futhi, indawo engcono kakhulu yabantu abafuna indawo enokuthula yokufunda, umsebenzi wokucwaninga, nokusebenza ekhaya.
Ikotishi, elinomklamo oyingqayizivele kanye nohlelo lombala, litholakala esakhiweni esithe xaxa se-2 Kanal. Ibekwe ngokubabazekayo endaweni ephakeme, ikotishi linomyalo futhi aliphazamiseki (ikhadi leposi lesithombe!) eduze kakhulu ne-Beas river kanye nedolobha laseNadaun, kanye nokhahlamba lwezintaba lwe-Dhauladhar oluqhamuka ngemuva.
le Ndlu ilungele labo abafisa ukuvakashela izindawo eziningi esifundeni saseKangra njengeDharamshala, Palampur, Kangra, Nagrota Surian, Baijnath. Izivakashi zethu zingakwazi ukuthatha uhambo lwezinsuku ziye ezindaweni okuyiwa kuzo ezingenhla futhi zibuyele esimweni esinethezekile nesifudumele ebusuku, ngaleyo ndlela zigweme izinkinga zokubhukha indawo yokuhlala ehhotela ezindaweni eziningi.
Izivakashi zizokwazi ukufinyelela kuso sonke isitezi sokuqala kanye nethala. Yonke indawo ezungezile inezivande zemifino, amasimu ezithelo.
Kukhona inyuvesi yesi-Sanskrit eduzane enekhampasi yesimanjemanje ebukekayo.
Idolobhana eliyigugu lase-Garli & Paragpur eliseduze liyindawo yokhokho bakho.
Izivakashi zethu zinekhishi lokuhlanganyela elihlome kahle, njengoba singadli imifino singenza amalungiselelo ahlukene okupheka okungeyona imifino. sicela uqaphele ukuthi izitsha zizokwenziwa yisivakashi uqobo. Singakunikeza ukudla okuphekwe ekhaya (imifino kuphela) ngezindleko ezizwakalayo ezengeziwe. Izidlo ziphekwa kusetshenziswa imifino yasepulazini, ephilayo.
Isondelene kakhulu nemvelo ngakho-ke ungase uthande uhlaza endaweni kanye nezinye izinto ezithakazelisayo.
Ungazizwa uphephile futhi sizobe sikhona ukuze sikusize uma kudingeka.